Hiova endrika ny Kianja Antanikatsaka etsy Bemasoandro Itaosy – Antananarivo Atsimondrano. Nambaran'ny Filoha Andry Rajoelina, nandritra ny diany teny nanokatra ofisialy ny hetsika « Sosialim-bahoaka » ho an’Atsimondrano, ny alatsinainy 3 aogositra teo, fa efa tsy mendrika ny vanim-potoana ankehitriny intsony io kianja io, sady teo ihany koa no nivoaka ireo kintan'ny baolina kitra Malagasy, dia i Bôlida sy Abel Annicet izay kapitenin'ny Barea. Nambaran'i Andry Rajoelina teo anoloan'ireo vahoaka maro nihaino azy sy ny Ben'ny tanàna ao Bemasoandro Itaosy ny hanovana ny kianja tany mena ho kianja sentetika manarapenitra. Nanome toromarika ny Governoran'ny Faritra Analamanga, Hery Rasoamaromaka ny filoha ny amin'ny hanatanterahana izany. (Jereo Sary Tohiny)
Zanaka Malagasy, mipetraka sy milalao any Frantsa i Zilofo Marwan. 18 taona, teraka tamin’ny 15 jona 2002 tao Toulon (Frantsa) ary ranjanana ny tovolahy. Novolavolaina tao amin’ny Paris Saint Germain izy. Nitana toerana vodilaharana, natao irakiraka ary lasa elatra mpanafika. Ao amin’ny klioba Montpellier Héraut Sport Club (MHSC) sokajy latsaky ny 19 taona na U19 izy ankehitriny. Miaky ny fahaizana sy talenta ao amin’i Zilofo Marwan ingahy Frédéric Garny, mpanazatra ny MHSC U19, ary tsy nanafina ny hafaliany manana mpilalao hoavin’ny baolina kitra.
Misaona ny tontolon’ny spaoro mekanika, nodimandry tao an-tranony ny marainan’ity alahady 26 jolay 2020 ity i Andrianafetra Faly Robinson, nantsoin’ny namany Faly Be na "Le Roi Lion" teo amin’ny sehatry ny hazakazaka fiarakodia. Filoha lefitry ny « Fédération du Sport Automobile de Madagascar » na FSAM izy. Raha ny tsiahy fohy dia nianatra ho mpanamory fiaramanidina tany Etazonia i Faly Be, ary niverina an-tanindrazana ny taona 1994. Nirotsaka tamin’ny fifaninanana fanamoriana fiarakodia izy nanomboka teo, ary fiara Peugeot fantatra amin’ny marika liona, hatrany no nentiny, niandohan’ny « Le Roi Lion », zary raikitra niantsoan’ny namany azy.
Nitondra ny Real Madrid any amin’ny anaram-boninahitra faha-34 maha tompondakan’i Espaina azy ny fandresena azony 2 noho 1 omaly, nanoloana ny Villarreal. Ilay Frantsay, Karim Benzema no namono ny baolina roa mariky ny fandresena nandrombahan’ny Real Madrid indray ny tompondakan’i Espaina.
Ny 22 jona 2019 no niatrika ny lalao voalohany, nanamarika ny fandraisana anjara voalohany amin’ny dingana famaranana ny fiadiana ny tompondakan’i Afrika amin’ny baolina kitra ny Barea an’i Madagasikara. Ny «Syli national» an’i Guinée no nifandona voalohany tamin’ny Barea, tao amin’ny Vondrona B nisy azy, niaraka tamin’ny Burundi sy Nigéria. Nirava ady sahala 2 noho 2 ny ekipa roa tonta, tao Alexandrie. Nisantatra ny fampidiram-baolina i Guinée. Nanasahala ny isa i Abel Anicet. Nampidi-baolina indray avy eo i Carolus, ary nitarika 2 noho 1 i Madagasikara. Penalty no namonoan’i Guinée ny baolina faharoa nahasahala ny isa nisarahan’ny roa tonta. Nanomboka teo ny fientanan’ny Malagasy nanohana ny ekipany, ary nahavaky vava ireo teknisianin’ny kitra nanaraka iny CAN 2019 tany Egypta iny ny zava-bitan’ny Barea. (Jereo Sary Tohiny)
Nilatsaka ny sazin’ny Federasiona iraisam-pirenena ny baolina kitra na FIFA mampiatona amin’ny asany an’i Yves Jean-Bart, 73 taona, filohan’ny federasiona ny kitra any Haiti, noho ity farany voarohirohy ho nanolana zazavavy tsy ampy taona, mpilalao baolina kitra. Ny gazety anglisy The Guardian no nitatitra ny fitarainan’ireo zazavavy tsy ampy taona niharan’ny fanolanana nataon’i Yves-Jean Bart. Nisy tamin’izy ireo no voatery nanala zaza. Taom-piasana enina izao no nitantanan’i Yves-Jean Bart ny federasiona ny kitra any Haiti.
Nahatsiaro manokana, ka nanolotra fanampiana ho an’ireo mpilalao kitra nitondra avo ny voninahitry ny firenena sy nampamiratra ny baolina kitra malagasy, ary koa ireo mpisehatra rehetra eo amin'ny baolina kitra, ny Federasiona Malagasy ny Kitra sy ny Federasiona iraisam-pirenena ny kitra sy ny FIFA, hiatrehana izao fotoan-tsarotra izao. Natomboka teto Antananarivo ny fizarana fanomezana. Hisitraka fanampiana toy izao ihany koa ireo kintana fahiny ny kitra any amin'ny faritra. (Jereo Sary Tohiny)
mardi, 28 avril 2020 19:10
Lalao olimpika Tokyo 2020: Mety tsy hisy mihitsy …
Raha tsy voafehy hatramin’ny jona 2021 ny valanaretina Covid19 dia ho foana tanteraka ny Lalao olimpika Tokyo 2020, hoy i Yoshiro Mori, filohan’ny Komity mpikarakara tamin’ny fanambarana nataony androany talata 28 aprily 2020. Noho ity valanaretina mamely manerantany ity, dia efa nahemotra ho amin’ny 23 jolay ka hatamin’ny 8 aogositra 2021 ity Lalao olimpika, raha tokony hatao 24 jolay ka hatamin’ny 9 aogositra 2020. Andiany faha-XXXII ity Lalao olimpika Tokyo 2020 ity, miisa 33 ny taranjam-panatanjahantena hisy ahitana fifaninanana 321. Miraitowa sy Someity no sary famantarana ny Lalao. Raha ny tantaran'ny Lalao olimpika, dia tamin'ny ady lehibe ihany no nahitana fanemorana. Ho sarotra karakaraina kosa izany Lalao izany raha tsy misy vakisiny na fanefitra hiarovana amin'ity Covid-19 ity, hoy ireo mpikarakara. (Jereo Sary Tohiny)